Vokatry ny oram-be :: Tafakatra roa amby telopolo ireo maty, an’hetsiny no tra-boina • AoRaha
Miha mavesatra ny vokatr’ilay oram-be tamin’ny faritra maromaro teto Madagasikara, tamin’ny herinandro lasa teo iny. Efa tafakatra roa amby telopolo no namoy ny ainy ary an’hetsiny ireo tra-boina, araka ny tatitra avy ao amin’ny Birao misahana ny loza voajanahary (BNGRC), omaly tamin’ny 9 ora maraina.
Miisa folo ireo olona tsy hita popoka. Efa mahatratra dimy amby enimpolo sy eninjato sy enina arivo sy iray alina sy iray hetsy ireo tra-boina. Ny tany amin’ny faritra Sofia no tena maro ireo olona tsy manan-kialofana, izay tafakatra dimanjato sy dimy arivo sy efatra alina. Mana­raka azy ny faritra Alaotra Mangoro, mahatratra sivinjato sy telo alina, raha dimanjato sy enina arivo sy roa alina ny tany amin’ny faritra Boeny.
Mitohy ny famonjena voina
Olona miisa enina arivo sy iray alina tany amin’ny faritra Alaotra Mangoro, Betsiboka, Sofia, Boeny, Diana, Matsiatra Ambony, Melaky ary Analamanga no efa nafindra toerana.
Tsy mitsahatra ny asa fanavotana an’ireo tra-boina any amin’ny faritra Mitsinjo sy Mahajamba. Nahatratra dimanjato sy efatra arivo no nentina namonjy tanety ary telopolo amby zato tamin’izy ireo no tsy maintsy nalaina manokana tamin’ny angidim-by noho ny halavirana.
Vehivavy mitondra vohoka ny folo tamin’izy ireo. An-jatony ireo miaramila miasa eny amin’iny faritra iny
miaraka amin’ireo fitaovana toy ny sambo haingam-pandeha miisa efatra, fiaramanidina Cessna roa sy angi­dimby roa ary fiara valo tsy mataho-dalana mba hana­votana ny traboina amin’ireo toerana tena voa mafy.
Tonga nanolotra fanam­piana ho an’ireo tra-boina ihany kosa ny minisiteran’ny Mponina, tamin’ny sabotsy lasa teo ankoatra an’ireo efa natolotry ny fitondram-panjakana. Nanolotra vary 4 taonina sy “balles fripperie” roa izy.
Nanao antso avo ho an’ ny mpiray tanindrazana rehetra hanao tolo-tanana ho fanampiana ireo havana traboina ireo, ny minisitra Naharimamy Irmah. Eny anivon’ny BNGRC no hana­terana ny fanampiana rehetra.
Fanafihana sy vono olona :: Nahanton’ny jiolahy ny lohan’ilay sefo fokontany